गुठी विधेयक फिर्ता नभए दुई तिहाईको सरकार ढल्नसक्छ- चेतना भया – Nepal Japan
नेपाली समय : 11:33:56
जापानी समय : 02:48:56
11 June, 2019 16:51 | राजनीति | comments | 104250 Views
रैथाने धर्म-संस्कृति मासेर आयातित धर्म-संस्कृति प्रबद्र्धनको ग्राण्ड डिजाइन
सरकारले गुठी विधेयक ल्याएपछि यसको व्यापक बिरोध भएको छ । धर्म, संस्कृति र परम्परा मास्न खोजेको भन्दै जनता सडकमा उत्रिएका छन् तर सडकमा उत्रिएका जनतामाथि सरकार दमनमा उत्रिएपछि यो विषयले झन आक्रोश उत्पन्न गरेको छ ।
गुठी समाज सञ्चालनको एउटा परम्परा र संरचना हो । लिच्छविकालदेखि धर्म, संस्कृति र अन्य परोपकारको काम गुठीमार्फत सञ्चालन हुँदै आएको छ । करिब १५ सय वर्ष पुरानो गुठी परम्परा ध्वस्त पारेर धर्म संस्कृति मास्ने र गुठी जग्गा भूमाफियालाई सुम्पने गरी सरकारले विधेयक ल्याएको भन्दै राजधानीका हरेक वर्ग बिरोधमा उत्रिएका छन् ।
कतिसम्म भने इसाईकरणको सहजताका लागि रैथाने धर्म, संस्कृति मास्ने विदेशीको डिजाइनमा विधेयक आएको विश्लेषण समेत हुन थालेको छ । सरकार जनताको यो आवाज सुन्नुको साटो दमनमा उत्रन्छ, आफ्नो काम शतप्रतिशत सही भएको दम्भ देखाइरहेको छ । तर जनता जसरी सडकमा उत्रेका छन् यसलाई नजरअन्दाज गर्नु मुर्खता बाहेक केही हुँदैन ।
गुठी विधेयकको सबभन्दा बढी बिरोध राजधानी काठमाडौंका नेवार समुदायले गरिरहेका छन् । उनीहरुले बल प्रयोग गरेर गुठी विधेयक पारित भए दुई तिहाइको सरकार नै ढाल्‍ने चेतावनी दिएका छन् ।
मुलुकमा धार्मिक सास्कृतिक अतिक्रमणको बाढी आउँदा पनि आफ्नो मौलिक धर्म, संस्कृति र परम्परा जोगाइराखेका नेवार समुदाय आफ्नो धर्म, संस्कृति र परम्परा मास्ने गरी विधेयक आएको भन्दै बिरोध प्रदर्शनमा उत्रिरहेका छन् । उनीहरुले सो विधेयक खारेज नगरे मुलुकको परम्परा, धर्म र संस्कृति नै गम्भिर संकटमा फस्ने चेतावनी दिएका छन् ।
काठमाडौंमा निरन्तर गुठी विधेयक बिरुद्ध प्रदर्शन भैरहेका छन् । सोमबार साँझ राजधानीको इन्द्रचोकमा विरोधसभाको आयोजना गरिएको थियो । सो सभामामा बोल्दै प्रा डा केदारभक्त माथेमाले भन्नुभयो गुठीको जग्गा, धर्म, संस्कृति र अन्य परोकारको कामलाई धराशयी पार्ने गरी सरकारले विधेयक ल्याएको छ । विधेयकलाई स्थगन सबै एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्दछ ।
गुठी व्यवस्थापनको जिम्मा सम्बन्धित गुठीयारलाई दिनुपर्ने बताउँदै प्रा. डा माथेमाले प्राधिकरणको नाउँमा अधिकार केन्द्रीकृत गर्न सरकार लागेको आरोप लगाउनुभयो । राजा रणबहादुर शाहले गुठीलाई अलि–अलि बिगार गरेका थिए । अहिले त समाप्त पार्ने विधेयक ल्याइएको छ । यसलाई फिर्ता लिनुपर्दछ ।
सरकार धर्म प्रचारक भएको कांग्रेसको आरोप
गुठी संस्थानका पूर्व अध्यक्ष एवं प्रशासक पञ्चलाल महर्जन यो ऐन लागू भएसँगै गुठीको सम्पूर्ण हक, दायित्व प्राधिकरणमा सर्ने छ । गुठीको जिम्मा गुठीयारको हातबाट खोसिएर प्राधिकरणमार्फत कर्मचारीमा जानेछ । गुठीको जग्गा भूमाफिया, बिचौलियाले सहजै हडप्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।
विधेयकले देशभरका गुठीको एकीकृत विकास, सञ्चालन, व्यवस्थापन र प्रशासनका लागि राष्ट्रिय गुठी प्राधिकरणको परिकल्पना गरेको छ । यस्तो प्राधिकरणले गुठीका चल–अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, भोग गर्न र आवश्यकता अनुसार बेचबिखन गर्न सक्छ ।
तैनाथी भनेको मोही नलागेको जग्गा हो । यस्तो जग्गा तराई मधेशमा धेरै छ । विधेयकको यो प्रावधान जस्ताको तस्तै पारित भए न्यूनतम मूल्य तिरेर जोसुकैले गुठीको जग्गा किन्न बाटो खुल्नेछ ।
पशुपति विकास कोषका पूर्व सदस्य सचिव गोविन्द टण्डनको भनाइमा यस्तो प्रावधानबाट गुठीको स्वामित्वमा रहेको जग्गा–जमिन भू–माफियाका हातमा जाने सम्भावना प्रबल रहेको छ ।
गुठीका जग्गा रैतानी गर्दा दुरुपयोग भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले २०६५ वैशाख ११ गते रोक्ने फैसला गरेको थियो । यो विधेयकले सर्वोच्चको उक्त फैसला उल्ट्याउन खोजेको छ । यसले पनि भू–माफियाहरूको निम्ति गुठी जग्गा हडप्न बाटो खुल्ने पूर्व सदस्य सचिव टन्डनले बताउनुहुन्छ ।
विश्वभरका हिन्दुहरुको आराध्यदेव पशुपतिनाथको कति जग्गा थियो र अहिले कति बाँकी छ ? मन्त्रालयलाई थाहा छ कि छैन ? त्यो जग्गा खोजवीन गर्ने कि नगर्ने ? जनकपुरस्थित जानकी मन्दिरको नाममा रहेको सयौं विघा जमीन भूमाफियाको कब्जामा परेको छ । त्यो खोजविन गर्नुको साटो बचेखुचेका जग्गा समेत माफियालाई दिएर धार्मिक र सांस्कृतिक गतिविधि नै ठप्प पार्ने गरी कानुन बनाउनु देशघाती काम बाहेक केही हैन ।